၁၃ချပ် အခမဲ့ဂိမ်းအသစ် 1.0.0.26 - APK Download
Description of ၁၃ချပ် အခမဲ့ဂိမ်းအသစ်
၁၃ချပ်သည် ကစားသူ၏ ကိုယ်ဥာဏ်ကို စမ်းသပ်သည်။ ၁၃ချပ်ဂိမ်း၏ သော့ချက်က ကိုယ့်လက်ထဲတွင် ၁၃ချပ်ဖဲကို ရှိတဲ့အချိန် တွင် အကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ အမှတ်အမြင့်ရလျှင်ဆုပိုများရ သည်။ ဆယ့်သုံးချပ်သည် Google Playတွင် အကာင်းဆုံးဖဲမျိုးဂိမ်းဖြစ် သည်။
ဂိမ်းကစားနည်းလမ်း။ ။ ဖဲ၅၂ချပ်ရှိ၊ လူ၂-၄ ယောက်ဂိမ်းထဲဝင်လာ၊ ကစားသူတိုင်းသည်ဖဲ ၁၃ချပ်ယူ၊ ကစားသူသည် လက်ထဲ၏ဖဲ ၁၃ ချပ်ကို ၃ချပ်(ပထမတန်း)၊ ၅ချပ်(ဒုတိယတန်း)၊ ၅ချပ်(တတိယတန်း) သုံးတန်းခွဲခြားလိုသည်။ ပထမတန်းသည် ဒုတိယတန်းကိုငယ်ရမည်ဖြစ် သည်၊ ဒုတိယတန်းသည် တတိယတန်းကို ငယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်း၊ တတိယတန်း အစီအစဉ်အလိုက် တခြား ကစားသူနှင့်ပြိုင်ယှဉ်သည်။
၁၃ချပ်သည် အရှေ့တောင်အာရှရေပန်းစားလာသော ဖဲဂိမ်း ဖြစ်သည်။ သင်ကကစားစမ်းကြည့်ချင်သလား။ ကစားလျှင်အမြဲနိုင်အောင်ရမည်။
ဒေါင်းလုပ်အခမဲ့၊ မှတ်ပုံတင်မလို၊ နေ့စဉ်ကစားအခမဲ့။
အခန်းအများကြီးရွေးနိုင်ရမည်။ လူစိမ်းအခန်း၊ သီးခြားအခန်း၊ ပြိုင်ပွဲအခန်း၊ မင်းက စွမ်းရည်အထူးထက်မြက်သူနှင့်အတူပြိုင်ယှဉ်ရ သည်။
ပါဝငျ အန်စာ ကိုးမြီး ဖဲပြိုင်ယှဥ အခမဲ့လက်ဆောင်အများကြီးလက်ခံနိုင်ရမည်၊ ကစားလျှင်စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ မြန်မာ့ ၁၃ကတ်ပိုကာမှာ ရွှေရန်မှထုတ်သော မြန်မာ့ လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများ၌ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။အင်တာနက်ဖုန်းဖြင်အချိန်နေရာမရွှေးပြန်၍ ရှုံးကြွေးဆပ်နိုင်သောဂိမ်းများကစားခြင်း။ 3G ၊ ဒေတာကုန်အလွန်သက်သာ ။အင်တာနက်မကောင်းလဲချောမွေ့စွာက စားနိုင်ခြင်း။ရိုးရှင်း ၊ လွယ်ကူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းစည်းမျည်းများ။အဆင့်မြင့်ကစားသမားများနှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ။သင့်မိတ်ဆွေ
This game is intended for adult audiences and does not offer real money gambling or any opportunities to win real money or prizes. Success within this free poker game does not imply future success at real money gambling.
Similar to ၁၃ချပ် အခမဲ့ဂိမ်းအသစ်